होटेल ट्यूगलिआटिट होटेलहरू होटेलहरू, होटेलहरूको लागि मूल्यहरू, टर्लिटीटकी होटेलहरू
स्वागत छ! होलीटकीमा होटल तपाईको लागि पर्खिरहेको छ
गार्ड गरिएको पार्किंग
टेललिटटीमा आधुनिक सस्तो होटेल कृपया तपाईंलाई स्वागत छ। तपाईंको सेवामा: आरामदायक कोठा (ओछ्यान, टेलिभिजन, टेलिभिजन, टेलिफोन, टेलिफोन, रेस्टुरेन्ट, मासाज, मदिरा र अधिक।
होटल "1001 रात" - एक स्थान जहाँ तपाईं शहर हलचलबाट लुकाउन सक्नुहुन्छ र सौनाका साथीहरूसँगको साथीहरूसँग आराम गर्नुहोस्, जुन धेरै नजिक छ। टोगालिटी होटल भोरो नदी नजिकै अवस्थित छ।
पाहुनाहरू: टर्लिट्टीमा हाम्रो होटेलका स्टाफलाई होटल वा शहरमा स्थानान्तरण गर्न पाउँदा खुसी हुनेछ, जुन तपाईंलाई हाम्रो शहरमा आवश्यक पर्दछ।
होटेलको पहिलो तल्लामा क्याफे हो, जहाँ तपाईं एक खाजा खान सक्नुहुन्छ, र बिहान एक बिहानको खाजा हुन सक्छ
<< p> हामी क्याफे "100 रात" क्याफेड "1001 रात" को सम्पूर्ण टीमको लागि धन्यवाद दिन्छौं र टेबुलको सुन्दर डिजाइन। विशेष धन्यवाद म शिष्टताका लागि लहरलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु।
म होटल रेस्टुरेन्टमा तपाईंको कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु "1001 रात"। उत्कृष्ट अन्तरपाल, राम्रो सेवा। प्रशासक धेरै सम्भव छ। प्रतीक्षाकर्ताहरू पर्खन लामो समय सम्म सकेनन। शुद्ध, आरामदायी, सुन्दर, स्वादिष्ट। धन्यबाद!
हामी फेरि तपाईंको होटल भ्रमण गर्न चाहन्छौं। सुन्दर कोठा, स्वच्छ र आरामदायक। मैत्री कर्मचारी। सेवाको उच्च गुणवत्ता को लागी धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद!
<< p> म तपाईंको होटल times पटक भ्रमण गर्छु, सबै धेरै खुसी छन्। प्रशासकहरू धेरै मैत्री र पागल सुन्दर केटीहरू हुन्। अर्को पटक तपाईले टोलिट्टी शहर भ्रमण गर्नुभयो, म निश्चित रूपमा तपाईंको होटेलमा रोकिनेछु।
ठेगाना: रसिया, 00 4455007, सामरा क्षेत्र, केन्द्रको scune niters को shy nities। 2001/2010 दूरी। , 99 kmuarterport: कुरमेच - , 99 59 51.13 किलोमिटर --.13 किलोमिटर, kmozotume - 45.51 किलोमिटर, क्याथवेज मस्वाक - 4.5.51 किलोमि, लडा एन्यना - 6..5 किलोमिटर, पलिश्ती, समकालीन कला संग्रहालय, समकालीन कलाको विभाग - pl किलोमिटर
<< p> होटेल "उपग्रह" टोगालिटीको नजिक अवस्थित छ, भिज र प्रिबान्सेन्स्की क्याथेड्रलको नजिक छ। होटल शहर, परिवार जोडीहरु र व्यापार मानिसहरु को दृश्यहरु को लागी उपयुक्त छ।
पाहुनाहरू "उपग्रह" सँग एक सुखद वातावरणमा खानको लागि सन्तोषजनक र स्वादिष्ट अवसरहरू छन्। कुल काम तीन रेस्टुरेन्टहरू - रूसी, जापानी र चिनियाँहरू घडीनहरू। रेस्टुरेन्ट क्षमता 400 देखि 600 जना मानिसबाट फरक हुन्छ। यात्रु, वर्षवाहकहरू, छुट्टिहरू र अन्य गम्भीर घटनाहरूको आयोजनको लागि आवेदनहरू स्वीकार गरियो।
साथै, होटेल उपग्रहहरू विभिन्न विकल्पको एक किसिमका रमाईलोको साथ पाहुनाहरूलाई रमाईलो प्रदान गर्दछन् र खाली समय खर्च गर्न ब्याजका साथ। ती मध्ये एक सौना, पौंडी पोखरी, जिम, बिलियर्डहरू र बलिरहेको छ। र होटलमा बसिरहेको क्रममा अतिथिहरूलाई थप सेवाहरूको एक विस्तृत श्रृंखला, सुक्खा सफाई सेवाहरू, लुइस, xerox, EXCX, ESXX, ESX चुनौती, कार भाडा, कपाल ड्रायर, घर उपकरणहरूको अनुरोध प्रदान गर्दै।
• •••••W छिमईईईईईईईईईईईईईईईईईईईईईईईईडुडीईईईडुडी छ • •••••••• कसरी लेखक रिलक छ? • ••:
होटल जटिल "पन्ना" मा ठूला व्यापार केन्द्रहरूको नजिक AMSLOTSSTSSKSKY जिल्लामा अवस्थित छ।
चार स्ट्रिंगेरी भवनमा बन्द क्षेत्रमा होटेलमा विभिन्न कोटीहरूको लक्जरी होटल कोठा अवस्थित छ।
धूम्रपान गर्नेहरू र गैर धूम्रपान पाहुनाहरूको लागि कोठाहरू छन्। इन्ना होटलमा कोठाहरू (ओल्हाटी) मा कोठा प्रक्रामक रविश्वास प्यालेटहरूमा प्रस्तुत गरिन्छ जुन लक्जरी र भव्यता, सफ्ट र आरामलाई जोड दिन्छ।
newld (Tarlyatti) एक व्यक्ति वातानुकूलित प्रणाली, लामो दूरी र अन्तर्राष्ट्रिय संचार,224 घण्टा इन्टर्नेट पहुँच, एक लर्डरिटार बाथरूम, एक लहरायायर र एक सुरक्षित। किनकि पाहुनाहरू पकाइएको हिउँ टेढ़्बर्स र तौलिएमा शौचालयको पूर्ण सेट हो।
Pha> partewtewtrant होटेलको पहिलो तल्लामा रेस्टुरेन्ट त्यहाँ एक आरामदायी उत्कृष्ट रेस्टुरेन्ट छ, seve 35 सीटको लागि डिजाइन गरिएको।
रेस्टुरेन्टले शीर्ष गुणवत्ताका उत्पादनहरूको साथ मात्र काम गर्दछ। रेस्टुरेन्ट मात्र राम्रो डिनर र आराम गर्न सक्दैन, तर पनि: व्यापार वार्तालाप र व्यापार बुफेले एक प्रसिद्ध विवाह वा कर्पोरेट पार्टीमा।
पार्किंगले यस बाहिरी भिडियो निगरानी प्रणालीको साथ सुरक्षित पार्किंग प्रदान गर्दछ।